जलप्रलयपछि नोआलाई परमेश्‍वरको आशिष्‌ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जलप्रलयपछि नोआलाई परमेश्‍वरको आशिष्‌
उत्पत्ति ९:१-६ अनि परमेश्‍वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष् दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, फलवन्त र वृद्धि भएर पृथ्वीलाई फेरि भर। र पृथ्वीका हरेक पशुमाथि, आकाशका हरेक पक्षीमाथि, पृथ्वीमा चहलपहल गर्ने सबैमाथि र समुद्रका सबै माछाहरूमाथि तिमीहरूको डर र भय रहनेछ; तिनीहरू तेरा हातमा सुम्पिएका छन्। हरेक सजीव प्राणी तेरो निम्ति मासु हुनेछन्; मैले हरिया वनस्पतिझैँ तिमीहरूलाई सबै कुरा दिएको छु। तर रगतसँगको मासु, जुन रगत हो, तिमीहरूले खानेछैनौ। र म निश्‍चय नै तिमीहरूका जीवनका रगत लिनेछु; म हरेक पशुको साटो, र हरेक मानिसको साटो त्यो लिनेछु; हरेको मानिसको भाइको साटो म मानिसको जीवन लिनेछु। जसले मानिसको रगत बगाउँछ, मानिसबाटै त्यसको रगत बगाइनेछ: किनकि परमेश्‍वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुभयो।
यस खण्डमा तिमीहरू के देख्छौ? मैले यी पदहरू किन छानेँ? मैले किन जहाजमा नोआ र उसका परिवारका सदस्यहरूको जीवन बारेको एक अंश छानिनँ? किनकि आज हामीले बातचितगरिरहेको विषयसँग उक्त जानकारीको धेरै सम्बन्ध छैन। हामीले परमेश्‍वरको स्वभावमा ध्यान केन्द्रित गर्न गइरहेका छौँ। यदि तिमीहरू ती विवरणहरूको बारेमा जान्‍न चाहन्छौ भने, बाइबलमा आफै पढ्न सक्छौ? हामी त्यसको बारेमा यहाँ कुरा गर्नेछैनौँ। परमेश्‍वरका कार्यहरूलाई कसरी जान्‍ने भन्‍ने नै आज हामीले कुरा गर्न गइरहेको मुख्य विषय हो।
नोआले परमेश्‍वरको निर्देशनहरूको पालना गर्दै जहाज बनाएर परमेश्‍वरले संसारलाई नष्ट गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नुभएका जलप्रलयको दिनहरूमा जिएपछि, तिनका आठ जनाको सारा परिवार बाँचे। नोआका आठ जनाको परिवारबाहेकका सबै मानवजाति नष्ट पारिए, र पृथ्वीका सारा जीवित प्राणीहरू नष्ट पारिए। नोआलाई परमेश्‍वरले आशिष्‌ दिनुभयो र उसलाई र उसका छोराहरूलाई केही कुराहरू भन्‍नुभयो। ती कुराहरू परमेश्‍वरले उसलाई प्रदान गर्नुहुने कुराहरू र उसमाथि परमेश्‍वरको आशिष् थिए। यो आशिष् र प्रतिज्ञा परमेश्‍वरले उहाँलाई सुन्‍ने र उहाँका निर्देशनहरू स्वीकार गर्नेलाई दिनुहुन्छ र यो परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई इनाम दिने तरिका पनि हो। यसको अर्थ, परमेश्‍वरको नजरमा नोआ सिद्ध वा धर्मी मानिस भएता पनि र उसले परमेश्‍वरको बारेमा जति धेरै जानेको भएता पनि, छोटकरीमा भन्‍नुपर्दा, नोआ र उसका तीन छोराहरू सबैले परमेश्‍वरको वचनहरू सुने, परमेश्‍वरको काममा सहकार्य गरे र परमेश्‍वरका निर्देशनहरूबमोजिम तिनीहरूले गर्नुपर्ने काम गरे। फलस्वरूप, तिनीहरूले जलप्रलयबाट संसारको विनाशको क्रममा परमेश्‍वरको निम्ति मानव र विभिन्‍न किसिमका जीवित प्राणीहरूको रक्षा गरे र तिनीहरूले परमेश्‍वरको व्यवस्थापन योजनाको नयाँ चरणको निम्ति ठुलो योगदान गरे। उसले गरेका सबै कुराहरूको निम्ति, परमेश्‍वरले उसलाई आशिष् दिनुभयो। आजका मानिसहरूका निम्ति, नोआले गरेको काम उल्लेखनीय नहुन सक्छ। केहीले यस्तो पनि सोच्‍न सक्छन्ः नोआले केही पनि गरेनन्; परमेश्‍वरले तिनलाई बचाउने निर्णय गर्नुभएको थियो, यसैले तिनी निश्‍चय नै बाँच्‍ने थिए। ऊ जीवित रहनु उसको आफ्नै उपलब्धिहरूका कारणले थिएन। यो परमेश्‍वरले होओस् भनेर चाहनुभयो किनकि मानिस निष्क्रिय छ। तर परमेश्‍वरले त्यस्तो सोचिरहनुभएको थिएन। परमेश्‍वरको निम्ति, कुनै व्यक्ति महान् होस् कि तुच्छ होस् उहाँको इच्छा र उहाँको योजना सहज तरिकाले हासिल होस् भनेर यदि तिनीहरूले उहाँलाई सुन्‍न, उहाँका निर्देशनहरू र उहाँले सुम्पेका कुराहरूको पालना गर्न सक्छन्, र उहाँको काम, उहाँको इच्छा, र उहाँको योजनामा सहकार्य गर्न सक्छन् भने, त्यो व्यवहार उहाँको सम्झना र उहाँको आशिष्‌ प्राप्त गर्न योग्य ठहरिन्छ। परमेश्‍वरले त्यस्ता मानिसहरूलाई मूल्यवान ठान्नुहुन्छ र उहाँका निम्ति गरिएका तिनीहरूका कामहरू, तिनीहरूको प्रेम र स्‍नेहलाई उहाँले कदर गर्नुहुन्छ। यो परमेश्‍वरको मनोवृत्ति हो। त्यसो भए परमेश्‍वरले नोआलाई किन आशिष् दिनुभयो? किनकि मानिसका त्यस्ता कार्यहरू र आज्ञाकारिताप्रति परमेश्‍वरले यसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ।
परमेश्‍वरले नोआलाई दिनुभएको आशिष्‌को बारेमा, केही मानिसहरूले भ‍न्‍नेछन्ः “यदि मानिसले परमेश्‍वरलाई सुन्यो र परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्‍यो भने, परमेश्‍वरले मानिसलाई आशिष्‌ दिनुहुन्छ। यो भन्‍नुपर्ने कुरा नै होइन?” के हामी त्यसो भन्‍न सक्छौँ? केही मानिसहरू भन्छन्ः “मानिस परमेश्‍वरको आशिष्‌मा आनन्द लिने योग्यको छैन।” त्यो पूर्ण रूपमा सही छैन। कुनै एक व्यक्तिले परमेश्‍वरले सुम्पिनुभएको कुरालाई स्वीकार गर्दा त्यसका कामहरू असल वा खराब के छन् र त्यस व्यक्तिले आज्ञा पालना गर्‍यो कि गरेन र त्यस व्यक्तिले परमेश्‍वरको इच्छालाई सन्तुष्ट गर्‍यो कि गरेन र तिनीहरूले गरेको कामले मापदण्ड पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्‍ने कुराको निर्णय गर्नको निम्ति परमेश्‍वरसँग मापदण्ड छ। परमेश्‍वरले मानिसको हृदयको वास्ता राख्‍नुहुन्छ, तिनीहरूको सतही कामहरूलाई होइन। कसैले जुनसुकै तवरले काम गरे पनि परमेश्‍वरले त्यसलाई आशिष् दिनुपर्छ भन्‍ने छैन। परमेश्‍वरको बारेमा मानिसहरूमा यही गतल बुझाइ छ। परमेश्‍वरले कुनै कुराहरूको अन्तिम परिणाम मात्र हेर्नुहुन्‍न तर उहाँले मानिसको हृदय कस्तो छ र यी कुराहरूको विकासक्रममा मानिसको मनोवृत्ति कस्तो छ भन्‍ने कुरामा पनि उहाँले जोड दिनुहुन्छ र उहाँले तिनीहरूको आज्ञाकारिता, ध्यान र तिनीहरूको हृदयमा परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्ने चाहना छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ। नोआले त्यस समयमा परमेश्‍वरको बारेमा कति जानेका थिए? के त्यो तिमीहरूले अहिले जानेका धर्मसिद्धान्तहरू जति नै थियो? परमेश्‍वर बारेका धारणा र ज्ञान जस्ता सत्यताका पक्षहरूको आधारमा हेर्दा, के उसले तिमीहरूले जतिकै मलजल र हेरचाह प्राप्त गर्‍यो? होइन, गरेन! तर नकार्ने नसकिने एउटा तथ्य छ: आजका मानिसहरूको चेतना, मन र हृदयहरूको गहिराइमा, परमेश्‍वरप्रति तिनीहरूका धारणा र मनोवृत्तिहरू अस्पष्ट र अनेकार्थी छन्। मानिसहरूका एक भागसँग परमेश्‍वरको अस्तित्व प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति छ पनि भन्‍न सकिन्छ। तर नोआको हृदय र चेतनामा, परमेश्‍वरको उपस्थिति पूर्ण र शंकारहित थियो र त्यसैले परमेश्‍वरप्रति उसको आज्ञाकारिता विशुद्ध र जाँचको सामना गर्न सक्‍ने किसिमको थियो। परमेश्‍वरप्रति उसको हृदय शुद्ध र खुला थियो। परमेश्‍वरको हरेक वचनलाई पछ्याउनको निम्ति उसलाई मनाउन धर्मसिद्धान्तहरूको धेरै ज्ञानको आवश्यकता परेन, न त उसलाई परमेश्‍वरले सुम्पनुभएको कुरालाई स्वीकार गर्न र परमेश्‍वरले उसलाई गर्न लगाउनुभएका कुराहरू गर्न सक्षम हुनको निम्ति परमेश्‍वरको अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्ने धेरै तथ्यहरूको नै आवश्यकता नै उसलाई पर्‍यो। नोआ र आजका मानिसहरू बिचको अत्यावश्य फरक यही नै हो। परमेश्‍वरको नजरमा सिद्ध मानिसको वास्तविक परिभाषा पनि यही हो। परमेश्‍वरले नोआ जस्ता मानिसहरूको चाहना गर्नुहुन्छ। ऊ जस्तै मानिसलाई परमेश्‍वरले प्रशंसा गर्नुहुन्छ र ऊ पनि परमेश्‍वरले आशिष् दिने ठिकै प्रकारको व्यक्ति हो। के यसबाट तिमीहरूले केही अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्‍यौ? मानिसहरूले मानिसहरूलाई बाहिरबाट हेर्छन्, जबकि परमेश्‍वरले मानिसहरूको हृदय र तिनीहरूको सारहरू हेर्नुहुन्छ। परमेश्‍वरले कसैलाई पनि उहाँप्रति उत्साहहीन वा शंका हुने अनुमति दिनुहुन्‍न, न त उहाँले मानिसहरूलाई उहाँप्रति शंका गर्ने वा कुनै पनि प्रकारले उहाँको जाँच गर्ने अनुमति नै दिनुहुन्छ। यसर्थ, आजका मानिसहरू परमेश्‍वरको वचनसँग आमनेसामने भएता पनि—परमेश्‍वरसँग आमनेसामने भएता पनि—तिनीहरूको हृदयका गहिराइमा भएको केहीकुरा, तिनीहरूको भ्रष्टतापूर्ण तत्वको अस्तित्व र उहाँप्रति तिनीहरूको शत्रुतापूर्ण मनोवृत्तिको कारणले, परमेश्‍वरप्रति साँचो विश्‍वास गर्नबाट तिनीहरूलाई अवरोध गरेको छ र उहाँप्रति आज्ञाकारी हुनबाट रोकेको छ। यसैले परमेश्‍वरले नोआलाई दिनुभएको जस्तै आशिष् प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई धेरै कठिन छ।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम् १” बाट उद्धृत गरिएको
अघिल्लो: परमेश्‍वरले संसारलाई जलप्रलयद्वारा नष्ट गर्ने अभिप्राय राख्‍नुहुन्छ र नोआलाई जहाज बनाउने निर्देशन दिनुहुन्छ
अर्को: परमेश्‍वरले इन्द्रेणीलाई मानिससँगको आफ्नो करारको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ
परमेश्‍वरले इन्द्रेणीलाई मानिससँगको आफ्नो करारको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ
परमेश्‍वरले संसारलाई जलप्रलयद्वारा नष्ट गर्ने अभिप्राय राख्‍नुहुन्छ र नोआलाई जहाज बनाउने निर्देशन दिनुहुन्छ
उत्पत्ति ६:९-१४ नोआका पुस्ताहरू यी नै हुन्: नोआ तिनका पुस्ताका एक धर्मी र सिद्ध मानिस थिए र नोआ परमेश्‍वरसँग हिँड्थे। र नोआले तीन छोराहरू...